महरा भेट्न कारागार किन पुगे बाबुराम ? – ताजा समाचार
काठमाडौं । यौ-न दुरा-चारको अभि-योगमा पु-र्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारा-गार चलान भएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भेटेका छन् । सोमबार दिउँसो कारागार पुगेका भट्टराईले महरालाई भेटेका हुन् ।
स्रोतले जनाएअनुसार भट्टराईले महरासँग करिब १ घण्टा गो-प्य कुराकानी गरेका थिए । दिउसो ३ बजे का-रागार पुगेका भट्टराईले ४ बजेसम्म महरासँग एक्लै कुराकानी गरेका थिए ।
स्रोतले जनाएअनुसार भट्टराईले महरासँग एम-सीसी प्र-करण र उनीविरुद्ध चलिरहेको मु-द्दाको विषयमा छलफल गरेका थिए । एमसीसी प्रकर-ण चुलीएका बेला भट्टराईले गोप्य रुपमा महरालाई भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यसअघि महराको मु-द्दा र एमसी-सीलगायतका विषयमा छलफल गर्न नेकपा प्रमुख सचेतकसमेत रहेका देव गुरुङ्गले पनि कारा-गार पुगेर महरालाई भेटेका थिए ।
संसद सचिवालयकै कर्मचारीमाथि यौ-न दुरा-चारको अभियो-गमा गत असोज १९ मा सभामुख निवासबाटै प-क्राउ परेका महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनको आदेशले मु-द्दा पुर्पक्षका लागि का-रागार चलान गरेको हो ।